Ny toetr'andro sy ny toetr'andro any Los Angeles
Tanànan'i Los Angeles
Fampahalalam-baovao momba ny toetr'andro sy ny fepetra ankehitriny
Ireo olona mitsidika an'i Los Angeles voalohany dia manantena matetika ny lanitra, ny masoandro ary ny toetr'andro mafana mandritra ny taona, izay izay mety ho hitanao amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, tsy voaomana amin'ny hafanana mandritra ny fahavaratra na ny hafanana amin'ny fahavaratra izy ireo. Raha ny tena izy, amin'ny fotoana mety, ny mari-pahaizana amin'ny lohataona dia mety mahatratra 20 degre na mihoatra (F) avy eny amoron-dranomasina ka hatrany amin'ny lohasaha. Ny fahasamihafana eo amin'ny ririnina dia tsy dia mihena loatra Ireto misy zavatra mahaliana mahaliana momba ny LA weather.
Na dia ny fotoanan'ny orana aza ny ririnina, dia ny vanim-potoana mazava ihany koa, raha oharina amin'ny alim-bavintsika, izay maina, fa maivana, indrindra fa eny amoron-dranomasina.
Mihena 20 degre ambanin'ny ririnina ka hatramin'ny fahavaratra. Ny mari-potsin'ny rivotra isaky ny 10 degre ambanin'ny ririnina ka hatramin'ny fahavaratra.
The Winter Bounce . Rehefa mijery ny hafanana avo lenta ianao, dia tadidio fa mandritra ny vanin-taona, ny mari-pana ambony ambany dia mety maharitra mandritra ny andro iray. Amin'ny ririnina dia mety ho tapitra ny hafanana midina midina midina mandritra ny minitra vitsy alohan'ny hianjeran'ny merkiora indray.
Ny akanjo miloko manga no tsara indrindra amin'ny andro manorana, na fahavaratra izany na ririnina. Mafana ny ririnina amin'ny ririnina sy ny lohataona, na dia mangatsiatsiaka aza ny rivotra, toy ny akanjo lava mainty na kapa mainty lava matevina mety hahatonga anao ho mafana tsara. Mety ho sarotra ny hahita fialan-tsiny mampiadana rehefa mafana ny masoandro ary mangatsiaka ny rivotra.
Amin'ny andro maizina sy manjombona, ny hafanana hita taratra eny amin'ny lampivato na ny fasika dia mety hampitombo ny mari-pana. Na dia mety hamaky 80 degre ny valan-drongony aza, dia mety hahatsikaritra kokoa ny 90 raha toa ianao ka mandeha an-tongotra mankany Hollywood na mandehandeha eny amin'ny valan-javaboary.
Miresaka momba ny Diaben'ny volana Jona isika mba hamaritana ny tranga iray rehefa ny rahona avy any an-dranomasina - antsoina hoe ny sarin-dranomasina - dia miditra an-tanety eny amoron-dranomasina ary indraindray mankany amin'ny lohasaha. Inona no tsy tian'ireo biraon'ny fivoriambe sy ny mpitsidika fa ny fiarahan'ny LA Gloom dia afaka manomboka amin'ny volana Mey ka hatramin'ny volana septambra. Amin'ny ankapobeny, ny volana Jolay sy Aogositra dia mirehitra ny rahona amin'ny mitataovovonana ary ny masoandro dia mivoaka eo amoron-dranomasina . Raha manomana maraina amin'ny fahavaratra ianao dia makà sweety.
Mifanohitra amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena izay ahitana ny olona mametaka ny kapaoty sy ny jirom-boninahitra eo amin'ny marika voalohany amin'ny fahavaratra, ao LA, ny takarivan'ny lohataona dia mangatsiaka . Kafe any Sidewalk dia manana fantson-drivotra ivelan'ny trano, saingy te-hanana an'io jirobe io ianao, na dia tsy manakaiky ny moron-dranomasina aza ianao.
Ny fampiendrehana ny fitsipika dia rehefa manana ny sata Santa Ana isika . Izany dia rehefa mitsoka avy any an-tendrombohitra ny rivotra mafana ka mankany amin'ny moron-dranomasina, mitondra ny kalitaon'ny rivotra marevaka sy ny loza mitatao amin'ny afo. Izy ireo ihany koa dia mitondra alina amam-bika tsy fahita firy eny amoron-dranomasina. Ny rivotra Santa Ana dia mitranga matetika amin'ny fararano amin'ny fararano, saingy mety hitranga any amin'ny taona.
Eritrereto ny zavatra tsy ampoizina . Na dia eo aza ny averina, mora kokoa ny manjo ny herinandro ny toetrandro 80 degre amin'ny midwinter sy ny herinandro amin'ny mari-pahaizana 68 degre amin'ny midsummer, mijery ny fandrosoana alohan'ny handraisanao azy.
Fomba hankalalantsika ny Krismasy ao amin'ny Faritra Berry
Tanjona ao Los Angeles, Kalifornia
Grinchmas ao amin'ny Universal Studios Hollywood 2017-2018
Top Night Clubs and Bars any Downtown Long Beach
Toeram-pisakafoanana romantique any Los Angeles
Mozika tsy mahazatra sy mahazatra ao Los Angeles
Manaova ny dianao mankany amin'ny fanjakana any Washington
Hotel Reviews Wales: St Brides Spa Hotel ao Saundersfoot, Pembrokeshire
Hotely Charismatic ao amin'ny Golden Mile Durban
Torolalana ho an'ny Capua fahiny: Santa Maria Capua Vetere
Easter Parade and Festival Bonnet ao New York City
Zava-mahagaga hatao any Everett sy County Snohomish
Fahatakarana ny Nine: Inside Central High 1957
Toerana fiompiana sy fialam-boly any Michigan
Tantara fohy tao Harbour Pearl teo anatrehan'ny Ady Lehibe II
Ny Tacos tsara indrindra any Austin
Seestalvan Orchard Homestay: Fijery mibaribary ao Kotgarh
Andron'ny Ray any Kalifornia